သတင်း - လက်သည်းဆိုးဆေး ဗဟုသုတ
A. ဒါကိုတော့ ပု၊လက်သည်းဆိုးဆေးတံဆိပ်ခတ်လွှာ
အကြောင်းရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ- လက်သည်းဆေးပြီး 1-2 ရက်အတွင်း အက်ကြောင်းများ ပေါ်လာတတ်သည်။UV gel လက်သည်းဆိုးဆေးပြီးပါပြီ။ကောင်းစွာမကိုင်တွယ်ပါက အလုံပိတ်အလွှာ အက်ကွဲသွားပြီး အမှုန်အမွှားများ ထွက်လာသည်အထိ အက်ကြောင်းများ တဖြည်းဖြည်း တိုးလာပါမည်။အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ ရေဆေးမဆေးသော တံဆိပ်ခတ်စက်ကို အသုံးပြုရခြင်း ဖြစ်သည်။ပွတ်တိုက်နိုင်သော တံဆိပ်ခတ်ခြင်း နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ရေမဆေးသော တံဆိပ်တုံးသည် ပိုမာကျောပြီး ကြွပ်ဆတ်သော အသွင်အပြင်နှင့် ခိုင်ခံမှု မလုံလောက်ပါ။လက်သည်းဆိုးဆေး၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အက်ကြောင်းများ မကြာခဏ ပေါ်လာတတ်သည်။ပွတ်တိုက်နိုင်သော သို့မဟုတ် မဆေးကြောနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့်တံဆိပ်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည့် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော တံဆိပ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။
B. အခွံခွာရန် လွယ်ကူသော အကြောင်းရင်းများလက်သည်း UV gel ဆိုးဆေး:
အကြောင်းရင်း 1- သေနေသောအရေပြားကို မဖယ်ရှားပါ။
လက်သည်းမဆိုးခင် အခြေခံလက်သည်းဆိုးဆေးလုပ်ရပါမယ်။ဒါက အခြေခံ U ပါ။V လက်သည်းဆိုးဆေးလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်။သေဆုံးနေသော အရေပြားကို သန့်ရှင်းစွာ မဖြတ်ပါက၊ လက်သည်းဆိုးဆေး အလွယ်တကူ ကျွတ်သွားနိုင်သည်။
အကြောင်းရင်း 2၊ primer အလွန်အကျွံ (အောက်ခံအင်္ကျီဂျယ်)
primer/bonding agent ကို တတ်နိုင်သမျှ ပါးပါးလေးလိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။အထူကြီးလိမ်းထားရင် လက်သည်းဆိုးဆေးက ကောက်ကြောင်းလွယ်ပါတယ်။
အကြောင်းရင်း 3၊ ဂျယ်ဆေးအရောင်သည် ထူလွန်းသည်။
ဟိဂျယ်ဆေးရောင်စုံအရမ်းမထူသင့်ပါဘူး။ယေဘူယျအားဖြင့် မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမှာ အရေးအကြောင်းများကို ရှောင်ရှားရန် အစိုင်အခဲအရောင်ကို နှစ်ကြိမ်နှင့် အလင်း translucent သုံးကြိမ်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ပထမအကြိမ်တွင် ပါးလွှာသောနေရာကို လိမ်းပြီး မီးထွန်းပြီးနောက် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လိမ်းရန် အကြံပြုထားသည်။ယေဘူယျအားဖြင့် အရောင်သည် အလွန်ပြည့်နေလိမ့်မည်။နောက်တစ်ခုကတော့ အစွန်းတွေကို အာရုံစိုက်ပြီး အလွှာတစ်ခုလုပ်တိုင်း အစွန်းတွေကို ခြုံဖို့ကြိုးစားပါ။
အကြောင်းရင်း 4- အလုံပိတ်အလွှာများလွန်းခြင်း(အပေါ်ထပ် အင်္ကျီဂျယ်လ် ပေါလစ်) လျှောက်ထားသည်။
တံဆိပ်ခတ်ထားသောအလွှာသည် လက်သည်းခွံအတွင်းသို့ မ၀င်ရောက်စေရန် ကြိုးစားပါ။ထုထည်အလွန်အကျွံယူ၍ လက်သည်းခွံထဲသို့ မတော်တဆ စိမ့်ဝင်သွားပါက လက်သည်းခွံကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး သန့်ရှင်းပေးပါ။
အကြောင်းပြချက် 5၊ သန့်ရှင်းရေးအရည်လုံလောက်စွာအသုံးမပြု
များများရလေလေ လျော့လေလေ ဖြစ်သင့်သည်။သန့်စင်ဆေးရည်ကဲ့သို့ မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ဆေးကြောပြီးနောက်၊ အကာအရံကို ခြောက်သွေ့ကွဲအက်ရန် လွယ်ကူမည်မဟုတ်သည့်အပြင် တောက်ပမှုကိုလည်း ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းရင်း 6- တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကို ရောနှောအသုံးပြုပါ။လက်သည်းဆိုးဆေး
နောက်ဆုံးတစ်ခုသတိပေးချင်တာကတော့ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးပါပဲ။လက်သည်းဆိုးဆေးကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသည်။၎င်းတို့ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါက အချင်းချင်း တွန်းလှန်နိုင်ပြီး သွန်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်စေသည်။ထို့ကြောင့် လက်သည်းဆိုးဆေးသမားများသည် မတူညီသော လက်သည်းဆိုးဆေး အမှတ်တံဆိပ်များကို ရောစပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
ဂ။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများလက်သည်း UV gel ဆိုးဆေးလည်ပတ်မှု-
2. primer မလိမ်းခင် ချိန်ခွင်လျှာကို နှစ်ကြိမ် ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
3. primer လိမ်းသောအခါ၊ ပမာဏသေးငယ်ရမည်၊ မဟုတ်ပါက ကျုံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
4. ထိုနည်းအတိုင်းပင်၊ အရောင်ကော်သည့်ပမာဏသည် သေးငယ်ပြီး ပါးလွှာသင့်ပြီး သန့်စင်သောအရောင်နှင့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောအရောင်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လိမ်းသင့်ပါသည်။
6. ဖယ်ရှားနိုင်သောကော်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သန့်ရှင်းရေးမဟုတ်သော sealant ကို အသုံးမပြုပါနှင့်၊ အက်ကွဲရန်လွယ်ကူသောကြောင့်၊
7. တံဆိပ်အမျိုးမျိုး၏ လက်သည်းဆိုးဆေးများကို ရောနှောခြင်းမပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ထို့အပြင်၊ အချို့သော လက်သည်းဆိုးဆေး အမှတ်တံဆိပ်များသည် တူညီသော အမှတ်တံဆိပ်၏ မီးချောင်းများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
8. တံဆိပ်ခတ်အလွှာကို သန့်ရှင်းရေးအတွက် ဂျယ်သန့်စင်ဆေးရည်သည် လုံလောက်သင့်ပါသည်။
9. လက်သည်းဆိုးဆေးကော်ကို ပွတ်တိုက်သောအခါ ပြင်းထန်စွာမနှိပ်ပါနှင့်၊ တူညီသောထောင့်၊ ဖိအား၊ နှင့် arc တို့ဖြင့် ညင်သာစွာ ပွတ်တိုက်ပါ။
10. လက်သည်း၏အောက်ခြေရှိ လက်သည်းဆိုးဆေးကို arc ပုံစံဖြင့် ပွတ်ပေးပါ။
သင့်အတွက် Newcolorbeauty ထုတ်လုပ်သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။UV gel polish လုပ်ငန်း :
၈၆ ၁၃၆ ၆၂၉၈ ၇၂၆၁
စာတိုက်အချိန်- နိုဝင်ဘာ- ၀၆-၂၀၂၁